Glassdoor Job Search - Apply for your next job now 7.9.2 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 7.9.2 လြန္ခဲ့ေသာ4ရက္က
Application မ်ား စီးပြားေရး Glassdoor Job Search - Apply for your next job now
Glassdoor Job Search - Apply for your next job now ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
Find jobs, salary references, company reviews and benefits in one handy place, with the Glassdoor app. Welcome to the top job seeker resource for Android and apply for your next job now.
Job search and career builder on the go - read the freshest job listings, openings and honest company reviews, wherever you are. Plus, you can find out what it's really like to work for companies; from office culture to salaries and benefits, we've got everything you need to know to follow your dream career and discoverajob you'll love!
Career builder, job search & more:5amazingly useful features on the Glassdoor app:
1. Job search - Our powerful job search tool automatically finds the most suitable new vacancies for you among millions of job listings
2. Company reviews - Know what former and current employees really think and see benefits, salaries and the office culture
Get access to the latest job listings as well as company reviews and salary reports, shared by those who know the company best – the employees. Job-hunting has never been so transparent, easy, and efficient.
• Receive instant push notifications as soon as we find jobs suited to you
• Easily see which job listings are new in the last day
Company Reviews, Salaries & Benefits
အဆိုပါ Glassdoor app ကိုအတူတစျခုနေရာလေးကိုအရပျ၌အလုပ်အကိုင်များ, လစာကိုးကား, ကုမ္ပဏီပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းနှင့်အကျိုးအမြတ်ကိုရှာပါ။ Android အတွက်ထိပ်တန်းအလုပ်ရှာဖွေသူသယံဇာတမှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည်နှင့်ယခုသင်၏နောက်အလုပ်လျှောက်ထား။
သွားလာရင်းယောဘသည်ရှာဖွေရေးနှင့်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဆောက် - သင်သွားလေရာရာ၌, ဆီမှာအလုပ်စာရင်းများ, အဖွင့်နှင့်ရိုးရိုးသားသားကုမ္ပဏီပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းဖတ်ပါ။ Plus အား, သင်ကကုမ္ပဏီများအတွက်လုပ်ကိုင်ဖို့အမှန်တကယ်ကြိုက်နှစ်သက်မယ့်အဘယ်အရာကိုထွက်ရှာတှေ့နိုငျ; ရုံးယဉ်ကျေးမှုထဲကနေလစာနှင့်အကျိုးခံစားခွင့်မှကျနော်တို့သင်သည်သင်၏အိပ်မက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတိုင်းလိုက်နာနှငျ့သငျခစျြပါလိမ့်မယ်အလုပ်ရှာဖွေတွေ့ရှိရန်ကိုသိရန်လိုအပ်သမျှရရှိပါသည်!
အလုပ်ရှာဖွေရေးဆောက်, အလုပ်ရှာဖွေရေး & ပိုပြီး: အ Glassdoor app ကိုပေါ်5အံ့သြလောက်အောင်အသုံးဝင် features တွေ:
1. ယောဘကိုရှာဖွေရေး - ကျွန်ုပ်တို့၏အစွမ်းထက်အလုပ်ရှာဖွေရေးကိရိယာတခုအလိုအလျှောက်အလုပ်စာရင်းများသန်းပေါင်းများစွာသောလူတို့တွင်သင်တို့အဘို့အသင့်တော်ဆုံးအသစ်ကနေရာလွတ်ကိုတွေ့
2. ကုမ္ပဏီပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း - ဟောင်းတဦးအဘယ်အရာနှင့်လက်ရှိဝန်ထမ်းတကယ်ထင်ကိုသိနှင့်အကျိုးအမြတ်, လစာနှင့်ရုံးယဉ်ကျေးမှုကိုတွေ့မြင်
သငျသညျအကောင်းတစ်ဦးအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအခွင့်အလမ်းအပေါ်ထွက်လက်လွတ်ဘယ်တော့မှဒီတော့အလုပ်အကိုင်အခွင့်အ Save သို့မဟုတ်သင့်ဖုန်းမှတိုက်ရိုက်လျှောက်ထား (ကိုယ့်ကို 'ဖုန်းတွင် Apply' 'တံဆိပ်ကိုရှာ) -3သွားလာရင်း Apply
4. အင်တာဗျူးမေးခွန်းများ & ပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်များ - အင်တာဗျူးရှိသလား? ပုံမှန်မေးခွန်းတွေနဲ့အင်တာဗျူးအတွေ့အကြုံများဖတ်ရှုခြင်းဖြင့်ပြင်ဆင်ပါ
5. ကိုသင်ကိုက်ညီအလုပ်အကိုင်များကိုရှာပါ - ငါတို့သည်သင်တို့၏အလုပ်ရှာဖွေရေးကိုက်ညီသောအသစ်သောအလုပ်အကိုင်များစာရင်းများမြင်သောအခါကျနော်တို့ကိုသင်သတိပေးပါလိမ့်မယ်
အဆိုပါန်ထမ်း - နောက်ဆုံးပေါ်အလုပ်စာရင်းများမှဝင်ရောက်ခွင့်အဖြစ်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီကိုသိသောသူတို့သည် shared ကုမ္ပဏီပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းနှင့်လစာအစီရင်ခံစာများ, ရယူပါ။ ယောဘသည်-အမဲလိုက်ဒါ, ပွင့်လင်းလွယ်ကူ, ထိရောက်ဖူးပါ။
သင့်ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဆောက်ယခု Download များနှင့်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အရှာသွားလာရင်းလျှောက်ထားခြင်းနှင့်အမှန်တကယ်သင်တို့ဆီသို့အရေးပါသောအလုပ်နှင့်ရုံးအသေးစိတျအကြောင်းကိုဖတ်ပါ:
•သင့်စျေးကွက်တန်ဖိုးကအတူတူပဲလယ်ပြင်၌ပုံမှန်လုပ်သားများမှနှိုင်းယှဉ်ပုံကို, အချိန်ကျော် trended ထားပြီးဘယ်လိုထုတ်ဖေါ်နှင့်လည်းသင့်ရဲ့လက်ရှိအခြေလစာကြံစည်ဖို့ 'သငျ့ Worth သိပါ' 'tool ကိုသုံးပါ
•ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်ဝန်ထမ်းကသူတို့ကိုစဉ်းစားနေကြတယ်ဆိုတာကိုအကျိုးခံစားခွင့်နှင့် ပတ်သက်. Read
ယောဘကိုရှာရန် & VACANCY သတိပေးချက်များ
•ကြော်ငြာကို Save လုပ်ရန်အလုပ်အကိုင်များသို့မဟုတ်သင်ကောင်းတစ်ဦးအခွင့်အလမ်းအပေါ်ထွက်လက်လွတ်ဘယ်တော့မှဒါကြောင့်သင့်ဖုန်းမှတိုက်ရိုက်လျှောက်ထား (ကိုယ့်ကို 'ဖုန်းတွင် Apply' 'တံဆိပ်ကိုရှာ)
ကုမ္ပဏီပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်များ, လစာ & အကျိုးကျေးဇူးများ
•အလုပ်ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ပတ်သက်. န်ထမ်းအနေဖြင့်ပြန်လည်သုံးသပ်ချက်များ, ယဉ်ကျေးမှု, အကြီးတန်းခေါင်းဆောင်များနှင့်ဆက်ဖတ်ရန်
•ကြည့်ရန်အပြစ်တွေ, cons နှင့်အကြီးတန်းစီမံခန့်ခွဲမှုမှအကွံဉာဏျ
•နောက်ဆုံး update ရရန်သင့်အကြိုက်ဆုံးကုမ္ပဏီများသည်ကိုလိုက်နာပါ
•အလွယ်တကူပြန်သင် "ကုမ်ပဏီမြား" tab ကိုအပေါ်ကိုချစ်ကုမ္ပဏီများရန်သင့်လမ်းကိုရှာဖွေ
အတိုင်းလိုက်နာအသစ်ကုမ္ပဏီများ• Get သက်ဆိုင်ရာအကြံပြုချက်များ
ယောဘကိုအင်တာဗျူးမေးခွန်းများ & ပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်များ
သင့်ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဆောက်နှင့်အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရေးယခု Download နှင့် Glassdoor နှင့်အတူယခုသင်၏နောက်အလုပ်လျှောက်ထား။
Glassdoor Job Search - Apply for your next job now အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Glassdoor Job Search - Apply for your next job now အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Glassdoor Job Search - Apply for your next job now အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Glassdoor Job Search - Apply for your next job now အား အခ်က္ျပပါ
9plusapps စတိုး 1 586
Glassdoor Job Search - Apply for your next job now ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Glassdoor Job Search - Apply for your next job now အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 7.9.2
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://www.glassdoor.com/about/privacy.htm
App Name: Glassdoor Job Search - Apply for your next job now
Release date: 2019-08-14 04:55:02
လက်မှတ် SHA1: A1:97:C0:18:2E:9E:C1:24:32:D1:F4:93:EA:EF:44:31:29:B2:25:C4
ထုတ်လုပ်သူ (CN): Vikram Aravamudhan
အဖွဲ့အစည်း (O): Glassdoor Inc.
နယ်မြေ (L): Sausalito
နိုင်ငံ (C): 94965
Glassdoor Job Search - Apply for your next job now APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ